6 Waxyaabaha Laga Yaabo Inaad Ka Fekereysid Ka Hor Bilaabidda Ganacsiga Web Hosting
6 Waxyaabaha Lagu Hormarinayo Ka Hor Inta Aan La bilaabin Ganacsiga Web Hosting
Waxay qaadataa khibrado badan oo farsamo, sabir, xirfad ganacsi, iyo dadaal joogto ah oo lagu bilaabayo laguna hirgelinayo ganacsiyada websaydhada si guul leh. Inkastoo hal-abuurka xakamaynta xakamaynta, rakibayaasha hal-tiirsan, iyo baakadaha kale ee casriga ah ayaa shaqada ka dhigey mid sahlan, maaraynta ganacsiga martigelinta maaha mid fudud sida ay u dhawaaqayso!
1. Aqoonta Isticmaalka Wadooyinka iyo Softwareka
Waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa ugu dambeeya ee barnaamijyada iyo barnaamijyada lagu daray, sida ay u shaqeeyaan iyo inta ay ku kacayaan. Waa lagama maarmaan in la ogaado barnaamijka lagu rakibay server-ka.
2. Lacag-bixiyeyaasha / Lacag-iibsiga: Haddii ay dhacdo inaad iibsato jiliciyaal, waxaad leedahay fursado badan; waxaad kireeyahaaga ka kireyn kartaa shirkadaha qaaliga ah, sida Gateway ama Dell ama ka heli karaan nidaam ay dhistaan ​​kuwa sameeya. Dhanka kale, waxaad ka iibsan kartaa baayacmushtarada xayeysiisyada oo ka mid ah qoraallada waaweyn sida GoDaddy, HostGator, LunarPages, iPage, JustHost, FatCow ama InMotion (taasi waxay u dhacdaa ugu dambeyn soo galaha xayeysiiska martigeliyaha, waxaana uu hadda ku siinayaa heshiis qancis ah xirmooyinka baayacmushtarka). Doorashada shirkadda iibiyaha ee iibiyaha waa mid ka mid ah go'aamada ugu muhiimsan ee la qaadayo ka hor intaan la bilaabin ganacsiga martigelinta, iyo haddii aad halkan ku khaldan tahay, markaa wax walboo dhami wuxuu ku dhamaanayaa!
3. Taageerada Macaamiisha: Si aad macaamiishaadu u faraxsanaato, waxaad u baahan tahay inaad siiso taageero si ay u xalliyaan dhammaan dhibaatooyinkooda xirfad leh, iyada oo aan la sugin saacadaha sugitaanka.
Macaamil kasta wuxuu filayaa taageero saacadaha iyo saacadaha degdegga ah ee ganacsiga, laakiin haddii aad ka fekereyso inaad bilawdo ganacsiga martigelinta guriga , markaa waxay noqoneysaa mid aad u muhiim ah. Waa inaad awood u yeelatid dhammaan waxyaabaha iibka iyo arrimaha farsamada ee mudnaanta sare leh. Kaliya haddii aad hubto inaad bixiso heer aad u sarreeya, waa inaad dhab ahaantii sii wadataa fikradahan. Qofka xiriirka ah iyo taageerada emailka ah waa in la bixiyaa si loo xaliyo arimaha deg-dega isla markiiba, xitaa marka waalidkaaga martigeliyaha bixiya uusan awoodin inuu caawiyo, waa inaad haysataa qof taageero ah oo u gooni ah si uu u xalliyo arrimaha ugu mudnaanta leh macaamiishaada ku faraxsan dhammaadka maalinta.
4. Doorashada Guddiga Xakamaynta: Waa inay lahaadaan waxyaabo taajir ah oo adag oo la socda shuruudaha ganacsigaaga. cPanel wuxuu noqdaa mid lagama maarmaan ah marka ay timaaddo inaad doorato guddi maamul ee user-friendly.
5. Fududeynta : Haddii aad tahay bilaw inaad iibsatid, shirkad waalidku waa inay bixisaa baako la isku habeeyey oo kuu oggolaanaya inaad abuurto oo aad suuqa gashato baayacmushtarka gaarka ah , kobcana marxalad kasta. Haddii waalidkaagu uu kuu fidiyo adeeg aad u culus, oo aanu soo bandhigin dabacsanaanta layska rabo, markaa dadaalkaaga oo dhan ayaa si toos ah u soconaya.
6. Sharraxaadda Shirkadda Waalidka : Ugu dambeyn, laakiin ugu yaraan, raadso dib u eegista macaamiisha oo isku day inaad ogaatid waxa ay macaamiishu kale u leeyihiin inay u sheegaan shirkadda martigelinta waalidka ee aad adigu doorato. Haddii shirkadda loo yaqaanno xamaasad aan la filaynin sida dhibaatooyinka shabakada, arrimaha amaanka, iyo wakhtiyada aan la qorshayn, markaa fursadaha xitaa macaamiisha martigelinaya ay ka wareeran yihiin dhibaatooyinka noocaas ah wax ka dambeeya. Iyo, qaybta ugu xumi waxay noqon laheyd inaadan dabooli doonin, maadaama macaamiishu ay kaa qaadi doonaan masuuliyada waqtiga dhimista, oo aan ahayn shirkadda waalidka!
Marka laga reebo kuwan oo dhan, halkan waa 6 talooyin oo aad ku xasuusan karto -
1. Ha bilaabin shirkad martigalinaysa adigoo indho la'aan noqda shirkad bixiye martigelinaya sababtoo ah waxay bixiyaan bandhigyo waaweyn oo CPA ah.
2. Ha isku dayin in aad cadeyso warqad caddeyn ah iyo iibiye adeegyada marti-geliye aan caan aheyn, sababtoo ah waxay u fiicnaan lahayd bilawga iyo kor u qaadida hindise cusub.
3. Dib-u-soo-noqoshada Piggy ee guulaha marti-geliyeyaasha caanka ah ee waddamada ayan haysanin joogitaan xoog leh, laakiin isla markaa, ma tartan aad u badan.
4. Xaqiiji in shirkaddaada marti gelisa waalidka martigelisa inay bixiyaan wakhti fiican
5. Iska ilaali taariikhda lacag bixinta ee kooxda martida loo doortay ee aad qorsheyneyso inaad kobciso shirkadda / shirkada.
6. Ha aad u maal gashan horumarinta ganacsiga cusub ee martigelinta, ilaa aad ka aragto jawaabta dadweynaha.
Eeg qorshooyinka martigelin ee kala duwan ee suuqa, oo isbarbardhig fursadaha qiimaha ah si aad ula timaado waxyaabo aad u jilicsan. Waxaad u baahan tahay inaad bixiso baayacmushtarka internetka ee la isku halayn karo, si ay u soo jiidato macaamiisha cusub, gaar ahaan haddii aad tahay ciyaaryahan cusub ee suuqa.
Ugu dambeyntii, waxaa ku saabsan fanka suuq-geynta, sidaa u sii soco oo sii si aad ujirtaada ugu wanaagsan, adoo eegaya xaqiiqooyinka la sheegey tixgelin.
Boggaaga Blogger ku rid boggaaga
Tumblr ee Toddobaadka
Dhibaatooyinka Amazon EC2
Sida Loo Beddeliyo Blogger
Sida loo bilaabo Vlogging on YouTube
Muhiimadda Nabadgelyada 100% Qancitaanka Macaamiisha Sida Web Host
Sida loo sameeyo WordPress Blog gaar ah
Akhristaha Gacmaha Ku Dhaji Boostada Boostada
Codaynta leh Sphero BB-8 Droid
Beddel sida Calaamadda Furahaaga ama magacaaga loogu talagalay qaabeeyaha
Isticmaalka iBooks iyo iBookstore
Sida loo sameeyo Poll ee Google+
GPS-ka caawiyay, A-GPS, AGPS
Haddii aad kugula hadashid kaliya telefoonkaaga casriga ah
Waa maxay Kleer Teknoolajiyadda Kumbuyuutarka iyo Halkee Ayuu Heli Doonaa?
Sida Loo Beddelo Midabka Midabka Ereyga Ku Dhajinta Laanta iyo CSS
Sida loo Fixiyo iPadka Qaboojiyaha "Hello" ama "Slide to Upgrade"
The Latest ee Qalabka GPS GPS
Naqshadeynta shabakadda internetka
Waa Maxay Maqalka? Hordhac u noqoshada Appemeral App
Maxay Doonayaan Marka Ay Geli Daaqada Gawaarida?
Maxay U Diideysaa Gawaarida Gawaarida Si Kama Dambe Shaqeyn?
Sida Loogu Heli Karo ama Loo Joojin karo Kala Hadalka Kala Hadalka Yahoo
Fahmidda Sawirrada Sawirrada iyo Bitmap
Waa Maxay Foomka EPRT?
Doorashada warqadda wareejinta saxda ah ee birta
Tallaabo Tallaabo Tallaabo Tallaabo Si aad u rakibto Fedora Linux
Sidee loo Xaqiijiyaa D3dx9_42.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladaadka